တစ်ဦးအစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello | USAHello
တစ်ဦးကအစိမ်းရောင်ကဒ် (အမြဲတမ်းနေထိုင်သူကဒ်) သင်အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်အရာကိုပြုသင့်သည်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းပြသတဲ့ကဒ်ဖြစ်ပါသည်. ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာတစ်နှစ်များအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံနေထိုင်ပြီးနောက်လျှောက်ထားရန်ဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည်. သင်တစ်ဦး asylee ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျမြားကိုလညျးတစျနှစျအပြီးလျှောက်ထားနိုင်မည်အကြောင်း. ဘယ်လိုဒုက္ခသည်များ Learn, asylees, နှင့်အခြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားရန်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့နောက်ခံအသနားခံစာမှတဆင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေး, သင့်ရဲ့အသနားခံစာကိုငြင်းပယ်လျှင်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်သင့်ရဲ့ status ကိုအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်. ဒီအတွက်ကြောင့်, သငျသညျလျှောက်ထားရှေ့မှာရှေ့နေအားဟောပြောဖို့အရေးကြီးတယ်. ရှိပါတယ် ရှေ့နေများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ သင်ကူညီမယျ့သူတိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်.
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာသင်သည်ဒုက္ခသည်တစ်ဦး status ကိုပေးအပ်ထားတယ်ရက်စွဲကနေအနည်းဆုံးတစ်နှစ်အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားရပါမည်. အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, သငျသညျရှိရမည်:
သင့်ရဲ့ဒုက္ခသည်ဝန်ခံချက်ရပ်စဲခဲ့မပေး (ယူအက်စ်အေ၌သင်တို့၏ဒုက္ခသည် status ကိုထိန်းသိမ်းထားပါပြီ)
ပြီးသားအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ status ကိုဝယ်ယူမရ
သင်တစ်ဦး asylee ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်သင်ခိုလှုံခွင့်နှင့်သင်တို့အဘို့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်တစ်နှစ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ status ကိုရယူနိုင်မည်အကြောင်း:
ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်ဆက်လက် (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်) ဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေး
သင်တစ်ဦးအစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားနိုင်သည့်အတွက်များစွာသောအခြားအမျိုးအစားရှိပါတယ်. သငျသညျမိသားစုဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, တစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖြစ်, သို့မဟုတ်ရှိသောကြောင့်သင်တို့ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သားကောင်ဖြစ်ကြ, လူကုန်ကူးမှုသို့မဟုတ်အခြားပြစ်မှုများ. အစိမ်းရောင်ကဒ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသူသည်အထဲက Find.
အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ status ကိုလျှောက်ထားရန်, Form ကိုငါ-485 file, အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အခြေအနေ Adjust ဖို့လျှောက်လွှာ. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဆေးစစ်တစ် USCIS ဆရာဝန်ပြည့်စုံ Form ကိုငါ-693 ဖေါ်ပြခြင်းအထောက်အထားရှိရမည်. ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, ဤပုံစံ file ရန်မကြေးလက်ရှိတွင်လည်းမရှိ. သင်လုပ်နိုင်သည် အကြောင်းသင်ယူနှင့် Form ကိုငါ-485 ကို download လုပ်ပါ. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် အကြောင်းသင်ယူနှင့် Form ကိုငါ-693 ကို download လုပ်ပါ.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သငျသညျ status ကိုသင့်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်လျှောက်ထားသင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီအကူအညီရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး.
ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းရှေ့နေများ၏အကူအညီမပါဘဲပြီးမြောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်ကူညီမယ့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်လူဝင်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, ကျေးဇူးပြု သငျသညျလျှောက်ထားမတိုင်မီဥပဒေရေးရာအကူအညီကိုရှာဖွေ.
အဆင့်အတန်း၏ဒုက္ခသည်ညှိယူအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင် USCIS ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်: 1-800-375-5283. သငျသညျဤနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုပါလျှင်, သငျသညျအကူအညီနဲ့ရတဲ့မတိုင်မီကိုင်အပေါ်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိစေခြင်းငှါ.
Form ကိုငါ-485 ကိုအသုံးပြုပြီးလျှောက်ထားရန်ဘယ်လိုဒီဗီဒီယို Watch
အစိမ်းရောင်ကဒ်ထားရှိခြင်းသည်ကိုသင်အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်နေထိုင်သူအဖြစ်အခွင့်အရေးကိုပေးသည်. သို့သော်တာဝန်များကိုရှိပါတယ်, လွန်း. ဤအတာဝန်ဝတ္တရားတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. USCIS အမြဲတမ်းနေထိုင်သူအဖြစ်ကပြောပါတယ်, သင် ... ရမည်:
ဝင်. အစေခံအားလုံး ယူအက်စ်အေ၏ဥပဒေများ နှင့်ပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံဥပဒေများ
file ကိုအခွန်ပြန်နှင့် လစာအခွန်
ယင်းနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန် ရွေးချယ်ဝန်ဆောင်မှု သင်တစ်ဦးအထီးအသက်အရွယ်လျှင် 18 ဖြတ်. 25.
သင်တို့အဘို့အခိုင်လုံသောတစ်ကဒ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြ 10 တစ်ခုခုကိုသက်တမ်းကုန်သွားပြီသို့မဟုတ်အတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ကိုအနှစ်6လများ
သင်၏ကဒ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး, ခိုး, သို့မဟုတ်ပျက်စီး
သင့်ရဲ့အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုအစားထိုးရန်သင့်အား Form ကိုငါ-90 file ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, (အမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ် Card ကိုအစားထိုးပါရန်လျှောက်လွှာ).
သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် mail ဖြင့်ဖိုင်ပုံစံကို download လုပ်ပါ.
သငျသညျတခုပုံစံတင်ပို့ရန်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် $455 နှင့်တစ်ဦး biometric ကြေး $85.
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုနှင့်လေ့လာပါ သငျသညျလျှောက်ထားပြီးနောက်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းနိုင်ငံသားလူတန်းစား sign up ပြုလုပ်ပါ